एनआरएन अमेरिकाको चुनाव :: Press Chautari ::
एनआरएन अमेरिकाको चुनाव
ऐना फेर्ने हैन अनुहार पखाल्ने
गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था एनआरएनको अमेरिकी च्याप्टरमा चुनावी पारो ह्वात्तै चढेको छ । अमेरिकाजस्तो समयको द्रुत रफ्तारमा चल्नुपर्ने मुलुकमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु समयको गति नै रोकेर चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् । यसले नेपाली जाति जहाँ बसे पनि चुनाव लाग्ने जातिमा पर्दो रहेछ भन्ने गतिलै दशी प्रमाण जुटेको छ । जनताका लागि, जनताको र जनताद्वारा भन्ने प्रजातन्त्रको उत्तम परिभाषा भएको मुलुकमा सहभागितामुलक चुनावी प्रक्रियालाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।
अमेरिकी भुइँमा अनलाइन पद्धतिमा चुनाव भैरहे पनि यसमा उठाइएका मुद्दा, उठेका उम्मेद्वार, चुनावी क्याम्पेन हेर्दा नेपालको गाउँठाउँमा हुने चुनावभन्दा रत्तिभर फरक अनुभव गर्न सकिदैन । २५ पदका लागि १५२ उम्मेद्वार, आफैंमा कीर्तिमानी लाग्छ । नेपालमा जसरी लक्ष्मण खड्का जुन पदका लागि सदावहार उम्मेद्वार हुन्छन्, त्यसरी नै यहाँ पनि कयौ उम्मेद्वारले त्यही र तालमा उम्मेद्वारी दिइरहेको पाइन्छ । कतिपयलाई त न एनआरएनको बारेमा आधारभूत कुरा थाहा छ न कुन पदको के काम हो, त्यो नै । तर, पनि उम्मेद्वारी दिएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मात्र सिर्जना गरिरहेका छैनन्, एक किसिमको मनोरञ्जन नै गराइरहेका छन् ।
अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीको यो चुनावमा कांग्रेस छन्, एमाले छन्, राप्रपा छन् । कांग्रेसमा मात्र हैन, राप्रपामा पनि वागी छन् । यो चुनावमा महिला छन्, पुरुष छन् । जनजाति आदिवासी छन्, दलित छन् । पूर्व छन्, पश्चिम छन् । जात छन् । साइनाहरु छन् । यताको मात्र हैन, नेपालदेखिकै साइना जोडिएका छन् । भूगोल मिसाइएका छन् । लिंगको सम्वन्ध खोजिएको छ ।
यी यावत कुराहरु कतिपयलाई अचम्म पार्ने खालका भए पनि यो स्तम्भकारका लागि भने अस्वभाविक हैनन् । किनकि, अहिले जो जो चुनावमा उम्मेद्वार छन्, उनीहरु सबै नेपालका बाबुनानी हुन् र त्यही आनीबानी लिएर यहाँ आइपुगेका हुन् । आफ्नो माउ पार्टी र मुलुकमा रहेको थिति कायम गर्नु अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरुको कर्तव्य पनि हो । किनकि, एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हुन नेपाली कागजको नागरिकताले मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यही अनुरुपको चालचलन र आचारविचार पनि हुनुपर्छ । उनीहरु त्यही निर्वाह गरेर साँचो मानेमा एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भैरहेका हुन् ।
एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, नेपालमा त बाराम्बार प्रयोगमा आउँछ पनि । युद्ध र प्रेममा जे पनि जायज हुन्छ । यी दुबैमा कि हार हुन्छ कि जीत । त्यही पृष्ठभूमीमा हार्नका लागि हैन, जित्नका लागि जे पनि जायज हुन्छ भनिएको हो । चुनाव पनि त्यस्तै हो । यसमा कि हार हुन्छ कि जीत । जीतका लागि जे पनि जायज हुनु यसको धर्म हो । यही सोच र कोणलाई आत्मसात गर्दै हुर्की बढेका नेपालीका लागि चुनावमा जे पनि जायज नहुने कुरै भएन ।
पछिल्लो पटक चुनावी जोड र कोणका लागि जे जस्ता गतिविधिहरु भैरहेका छन् , तिनीहरुलाई हेर्दा यसपटकको अमेरिकी नेपाली डायस्पोरामा हुने चुनावी चित्र पनि त्योभन्दा फरक हुने छाँट देखिन्न । त्यसका लागि आधारभूत प्रवृतिहरु देखिसकेका छन् । अहिले देखिएका त्यस्ता केही प्रवृत्तिको कुरा गर्दा शिखर प्रवृतिका रुपमा आफूमात्र ठीक उम्मेद्वार र अरु सबै अयोग्य उम्मेद्वार भन्ने सोच देखिएको छ । प्रायः जो कोही उम्मेद्वार पनि एउटै कुरा भनिरहेको भेटिन्छ, त्यो किन उठेको होला ? त्यसको के हैसियत छ र ? त्यसको के योगदान छ र ?
दोस्रो सोच उम्मेद्वारको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । यस क्रममा सुनिने कुरा यस्ता छन्, फलाना त करौती उम्मेद्वार मात्र हो, भोट काट्न ढिस्कानाले उठाएको । फलानाले त ढिस्कानाको पैसा खाएको छ । फलाना त चन्दा उठाउनकै लागि उम्मेद्वार भएको हो । फलाना त फेसबुके उम्मेद्वार हो । ढिस्कानाको के कुरा गर्नु, त्यो त चारमते उम्मेद्वार हो ।
तेस्रो सोचमा व्यक्तिगत आक्रमणको कोण भेटिन्छ । यस कोणअन्तर्गत यस्ता कुरा सुनिन्छन्, फलानी त ढिस्कानाको रखैल हो नि । त्यसको बूढा त कीर्तेमा परेको हो नि । त्यो त्यसकी कान्छी हो नि । फलाना त ठग हो । ढिस्काना त बैंक क्रप्ट हो । फलानाले त ढिस्कानाकी बूढीको चौपट पार्यो नि । त्यो फलाना छ नि, जिगेलो नै हो , आदि इत्यादि ।
यस्तो सोच र कोणलाई चुनावी भाषामा नेगेटिव क्याम्पेन र भाषालाई नकिंग कपी भनिन्छ । यसले नकारात्मक सोचको खेती मात्र गर्दैन, चुनावलाई सुकिलो नबनाएर फोहोरी बनाइदिन्छ । प्रकारान्तरमा, उम्मेद्वारहरुलाई नै बेकारमा उठिएछ भन्ने खालको दिक्दारी सिर्जना पनि गर्न सक्छ । आखिर जित्ने भनेको अहिले उठेकै उम्मेद्वारमध्येकै कसैले हो । यदि त्यो व्यक्तिलाई नकिंग कपीले नांगेझार पारियो भने अन्ततः त्यस्तो व्यक्तिले जितेर हाँक्ने संस्थाको गरीमा पनि रहदैन ।
आखिर कोही पनि त एनआरएन एनसीसी युएसएको बेइज्जत गर्न उम्मेद्वार भएको हैन । त्यसैले संस्थाको गरीमामै आँच आउने खालको चुनावी क्याम्पेन गर्नु कसैको पनि पक्षमा हुँदैन । हो, यस्तो संस्थामा आउने जो कोहीको पनि व्यक्तिगत आचरण र नैतिकता उच्चो हुनुपर्छ । किनकि, यो व्यक्तिगत संस्था हैन र यस्तो संस्थामा आउनेले यो मेरो व्यक्तिगत जीवन भनेर धर पाइदैन । तर, यसो भनेर मानवीय क्षम्य गल्तीलाई पनि अक्षम्यको कोटीमा राखेर कसैलाई पनि प्रहार गरिनु हुँदैन । मान्छेको जुनी हो, जीवनमा मानवीय कमी कमजोरी जसका पनि हुन्छन् ।
एनआरएन एक गैरनाफामुखी सामाजिक संस्था हो । यसमा आउन चाहने जो कोही पनि समाजसेवाका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी प्रस्तुत गर्ने नै हुन् । यसमा जित्नु भनेको मालिक हुनु हैन, सेवक हुनु हो । हो, शिक्षा, संस्कार र संगतले उम्मेद्वारमा उन्नाइस बीस हुन सक्छ । कसैले राम्रो शिक्षा लिने मौका पाउँछ, कसैले पाउँदैन । तर, कसैले राम्रो शिक्षा लिन पाएको छैन भन्दैमा उसको भावनामाथि चोट पुर्याउने अधिकार कसैलाई हुदैन । हो, कसैले राम्रो संस्कार पाएको हुनसक्छ त्यसको प्रभाव उसको व्यक्तित्वमा देखिन सक्छ । तर, कोहीले दुर्भाग्यवस त्यस्तो संस्कार पाएको हुँदैन र त्यसको झल्को उसको व्यक्तित्वमा देखिदैन । यसो भन्दैमा ऊ निन्दाको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यस्तै तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो, संगत । कसैले राम्रो संगत गर्ने अवसर पाएको हुन्छ, कसैले हुँदैन । संगत आफैंमा खुला विश्वविद्यालय हो । यही आधारमा मानिसको मूल्यांकन हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मान्छेको मुल्यांकन उसले कस्तो मानिससँग संगत गर्छ भन्ने आधारमा हुन्छ । अपवादलाई छोडेर खराब मान्छेसँग संगत गर्ने मान्छे पनि खराब नै हुन्छ । त्यसैले मूल्यांकनको यो आधारलाई केही हदसम्म नाजायज भन्न मिल्दैन । सामाजिक जीवन बाँच्न चाहनेहरुले यस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । यो त्यस्ता व्यक्तिहरुको सुखद् भविष्यका लागि मात्र हैन, संस्थाको गरीमा र स्वच्छ छविका लागि पनि अपरिहार्य हुन्छ ।
सारमा विदेशमा बस्ने हरेक नेपाली नेपालको अवैतनिक सद्भावना राजदूत हुन्छ । अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा रहेका हरेक नेपाली अमेरिकाका लागि नेपालका सद्भावना राजदूत हुन् । उनीहरुको आचरण र व्यावहारका आधारमा नै समग्र नेपाल र सारा नेपालीको मूल्यांकन हुने हो, नेपाली ओरिजिनप्रतिको धारणा बन्ने हो । यसका लागि ह्वाइट कलर काम नै चाँहिदैन, एउटा सामान्य स्टोरको ब्लुकलर काममा समेत त्योभन्दा पहिला कुनै नेपालीले काम गरेको छ भने उसकै कामको आधारमा निर्णय हुन्छ ।
यस अर्थमा पनि एनआरएन युएसएको चुनाव स्वस्थ बनाउनु सबै गैरआवासीय नेपालीको हितमा हुन्छ । यसबाट मात्र अमेरिकी नेपाली डायस्पोराको पक्षपोषण सम्भव छ । सामान्य मानवीय कमजोरीलाई बढाइचढाइ गरेर कसैका विरुद्ध नकिंग कपी या नेगटिव क्याम्पेन चलाएर नांगेझार बनाउनु यस अर्थमा पनि जायज हुदैन । बञ्चरो चलाउँदा चलाउनेले पहिला घुडो हो या मुढो, चिन्नुपर्छ ।
नयाँ सोच र कोणले प्रकारान्तरमा इतिहासको निर्माण गर्ने र नजीर बसाउने हो । यही सत्यलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सके अमेरिकी नेपाली डायस्पोरा निर्णायक हुन सक्छ । यो चुनावमा को उम्मेद्वार भयो, कति उम्मेद्वार भए त्यो महत्वपूर्ण हैन, महत्वपूर्ण त हरेक मतदाताले गर्ने मतको सम्मान हुन्छ कि हुँदेन भन्ने हो । हरकेलाई लागोस् कि उसको मतको सम्मान हुने छ र उसले चुनेको नेतृत्वले उसको भावनाको कदर गर्दै एनआरएनको गरीमा र प्रतिष्ठा उच्च राख्नेछ । यसो गर्न सकियो भने संख्यामा मात्र हैन, गुणमा पनि अमेरिकी गैरआवासीय नेपालीले नयाँ संस्कारको नजीर बनाउँनेछन् । समयको माग र निर्देश पनि यही नै हो । र, यसलाई सम्मान गर्न सके मात्र सबैको भलो हुन्छ । अन्यथा, चुनावका नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हैन अर्को एउटा भद्दा मजाक मात्र प्रदर्शन हुने छ । त्यसमा कसैलाई रमाइलो लाग्न सक्छ, तर प्रकारान्तरमा त्यसले नेपाली मूलकै नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्नेछ । आखिर कोही पनि नेपाली मूलको सभ्य नागरिकले त्यस्तो गर्ने त कुरै छोडौ, कल्पना पनि गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।
तस्बिर : विमल नेपाल
आइतवार, २०७१ चैत्र १५ गते १९:२२ / Sunday, Mar 29, 2015 7:22 pm